Vokatra - Baron (Sina) Co., Ltd.
Pataloha Lady Napkin
Polybag azo zahana
Kitapo diaper mety simba
Mahagaga ny diapera sasany, saingy mety tsy ho vitanao ny manamboatra ny fitehirizanao manontolo amin'ilay diaper iray manokana noho ny vidiny. Hamafana ny fihenjanana amin'ny teti-bolanao amin'ny alàlan'ny fanovana ireo diapra tsara indrindra ao amin'ny fitehirizanao.
Satria ny vokatra fikarakarana vehivavy dia fividiananao isam-bolana, dia midika izany fa mieritreritra foana momba ny vola sy ny fikarakarana ianao. Fa fantatrao ihany koa fa mila kalitao mandritra ny tsingerinao ianao. Izany no mahatonga antsika matetika manana tolotra tsara amin'ny marika tsara amin'ny vokatra fikarakarana vehivavy.
Raha miresaka momba ny vokatra fikarakarana olon-dehibe, betsaka ny famatsiana tsy azo ihodivirana azo isafidianana nefa ny mitady ny tsara dia mety ho sarotra. Betsaka ny lafin-javatra tokony hodinihina rehefa misafidy vokatra mitroka ianao, ao anatin'izany ny fahalalahana mifanentana amin'ny haavon'ny asa malalanao. Amin'ny maha orinasa efa za-draharaha mifantoka amin'ny vokatra fidiovana manokana dia azonay antoka fa afaka manome izay ilainao fotsiny izahay.
Miaina fiainana eco - Eto ny Besuper® hanandramana sy hampihenana ny habetsahan'ny fako manimba vokarintsika. Amin'ny fanovana kely ny fiainanao isan'andro dia afaka manampy amin'ny fanovana lehibe amin'ny fianakavianao sy ny tany misy anao ianao. Vodin-tseroka, kitapo misy otrikaina, sakafo fisakafoanana miorina amin'ny zavamaniry. Manana entana maro karazana biodegradable izahay, manala ny fako bebe kokoa amin'ny fanariam-pako.
Fanaparitahana ny mpanjifa manerantany
Diaper azo ampiasaina, Diaper olon-dehibe Super Absorbency, Diaper Eco avo lenta, Diaper zaza vao teraka, Famafana zazakely ho an'ny hoditra marefo, Diaper Baby,
Diaper Eco avo lenta, Diaper olon-dehibe Super Absorbency, Diaper Baby, Diaper azo ampiasaina, Diaper zaza vao teraka, Famafana zazakely ho an'ny hoditra marefo,